လေတစ်ခြမ်းဖြန်းသွားတဲ့…. လူရွှင်တော်… ဦးပေါ်လေး – ရှအေလငျး
လေတစ်ခြမ်းဖြန်းသွားတဲ့…. လူရွှင်တော်… ဦးပေါ်လေး
လေတစ်ခြမ်းဖြန်းသွားတဲ့ လူရွှင်တော် ဦးပေါ်လေးဆီသို့ လူရွှင်တော် ကောင်းကျော်က သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လိုအပ်တာသုံးဖို့အတွက် လူရွှင်တော်အသင်းကိုယ်စား ကူညီခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်)ရဲ့ နာယကကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးပေါ်လေးဟာ ဘယ်ဘက်တစ်ခြမ်း လေဖြန်းသွားလို့ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မေလ(၁၂) ရက်နေ့က လူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်) ကိုယ်စား လူရွှင်တော် ကောင်းကျော်ဟာ ဦးပေါ်လေးဆီ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကူညီထောက်ပံ့မှု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ နာယကကြီး ဟာသလူရွှင်တော်ဦးပေါ်လေးသည် ဘယ်ဘက်တစ်ခြမ်း လေဖြန်းသွားကြောင်း ကြားသိရပါ၍
လူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်)ကိုယ်စားကူညီထောက်ပံ့ငွေ ၁ သိန်းကျပ်တိတိ သွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။” ဆိုပြီး မေလ(၁၂) ရက်နေ့က လူရွှင်တော် အသင်းရဲ့ ပြန်ကြားရေး ကောင်းကျော်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဦးပေါ်လေးတစ်ယောက် ကျန်းမာရေး အမြန်ဆုံး ကောင်းမွန်လာဖို့ကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ဆုတောင်းလို့ နေကြပါတယ်။
လူရွှင်တော် ပေါ်လေးဟာ သဘင်လောကမှာသာသရုပ်ဆောင် နယ်ပယ်မှာပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဟာသပြတ်လုံးတွေ အနုပညာတင်ဆက်မှုတွေဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် ဘဝအမောတွေ ပြေစေခဲ့သူပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက သူ့ရဲ့ အနုပညာတင်ဆက်မှုတွေကို မြင်ချင်သေးတာကြောင့် ကျန်းမာရေး အမြန်ကောင်းလာဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးထားကြပါတယ်။
Photo : ကောငျးကြျော
လူရှငျတျောအသငျး(ရနျကုနျ)ရဲ့ နာယကကွီးတဈဦးဖွဈတဲ့ လူရှငျတျောကွီး ဦးပျေါလေးဟာ ဘယျဘကျတဈခွမျး လဖွေနျးသှားလို့ ဆေးကုသမှု ခံယူနရေတယျလို့ သိရပါတယျ။ မလေ(၁၂) ရကျနကေ့ လူရှငျတျောအသငျး(ရနျကုနျ) ကိုယျစား လူရှငျတျော ကောငျးကြျောဟာ ဦးပျေါလေးဆီ သှားရောကျတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ကူညီထောကျပံ့မှု ပွုလုပျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“လူရှငျတျောအသငျး(ရနျကုနျ)၏ နာယကကွီး ဟာသလူရှငျတျောဦးပျေါလေးသညျ ဘယျဘကျတဈခွမျး လဖွေနျးသှားကွောငျး ကွားသိရပါ၍
လူရှငျတျောအသငျး(ရနျကုနျ)ကိုယျစားကူညီထောကျပံ့ငှေ ၁ သိနျးကပျြတိတိ သှားရောကျကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါသညျ။” ဆိုပွီး မလေ(၁၂) ရကျနကေ့ လူရှငျတျော အသငျးရဲ့ ပွနျကွားရေး ကောငျးကြျောရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ဦးပျေါလေးတဈယောကျ ကနျြးမာရေး အမွနျဆုံး ကောငျးမှနျလာဖို့ကိုလညျး ပရိသတျတှေ ဆုတောငျးလို့ နကွေပါတယျ။
ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲ အတွက်ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းပန်ပြီး အကြောင်းရင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဖိုးသော်
ပျောက်ဆုံးသွားခဲတဲ့နှစ်နှစ်သားအရွယ် မြန်မာခလေးငယ် ကို ၉ ရက်မြောက်နေ့မှာတွေ့ပြီ 😢😢😢😢
“အသက် ၆ နှစ် ၇ နှစ်အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသူလေး(၄)ဦးကို ကျောင်းစောင့်မှ စာသင်ခန်းအတွင်း မဖွယ်မရာပြုလုပ်”
တော အဝတ်အစား ပုံစံ နဲ့ လင်မယား ကို အထင်သေးလိုက်မိတဲ့ တက္ကသိုလ်ဥက္ကဌရဲ့...
ကိုရီးယားနိုင်ငံသား..တစ်ဦး..၏အလောင်းကို ..ပုဂံဘုရား..ပေါ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့...
မွမွရုပျရှငျဇာတျကားမှာ မငျးသားနရောက သရုပျဆောငျမယျ့သူ ထှကျပျေါ